I William Miller dia mpitoriteny batista amerikana izay nitarika ny fihetsiketsehana protestantan'ny fifohazam-panahy iraisam-pinoana teo anelanelan'ny taona 1831 sy 1844, izay manambara ny fiverenan'i Jesosy Kristy amin'ny taona 1843-1844. Ny fampianarany dia nahazo ny anarana hoe milerisma na adventisma,
Taty aoriana dia niteraka fihetsiketsehanasy fikambanana adventista maro ny hafatr'i William Miller, indrindra ny Fiangonana Adventista Mitandrina ny Andro Fahafito.
1 Ny fiainan'i Miller talohan'ny fifohazam-panahy
1.2 Fiainana tao Poultney
2 I William Miller sy ny asany
2.1 Nandinika ny faminaniana ao amin'ny Baiboly
2.2 Namantatra ny fotoana hiverenan'i Kristy
2.3 Ireo fahadisoam-panantenana
2.4 Fiparitahan'ny mpanaraka an'i Miller
Ny fiainan'i Miller talohan'ny fifohazam-panahy[hanova | hanova ny fango]
Teraka tao Pittsfield any Massachusetts tamin'ny 12 Febroary 1782 i William Miller. Nanan-jandry miisa 15 izy. Ny kapiteny atao hoe William Miller, izay miaramila tranainy tao amin'ny Revolisiona amerikaina no rainy ary i Paulina zanakavavin'ny pastora batista atao hoe Elnathan Phelps no reniny. Ny reniny no nanabe azy hatramin'ny faha sivy taonany. Tia vaky boky i Wiliam Miller tamin'ny fahazazany sy ny fahatanorany.
Fiainana tao Poultney[hanova | hanova ny fango]
Nanambady an'i Lucy Smith izy tamin'ny taona 1803 ka nifindra tany amin'ny tanàna atao hoe Poultney, ka niroborobo tao ny asa fambolena sy fiompiana nataony. Nifandray tamin'ireo olona manaraka ny fireham-mpinoana sy filozofia deista nonina tao izy ka maro ireo bokin'ny mpanoratra deista voavakiny. Tsy ninoany ho teniin'Andriamanitra ny Baiboly izay noheveriny ho boky lany andro.
Nisy fotoana nanendrena azy ho sherif (1809), ho mpitsara manakaiky vahoaka i William Miller taty aoriana ary voafidy ho solombavambahoaka tamin’ny taona 1812. Lasa miaramila koa izy ka isan'ny nandray anjara tamin’ny ady nifanaovan'ny Amerikana sy ny Britanika tao Plattsburg tamin'ny taona 1812 izay naharesy ny Britanika tamin'izany na dia maro anisa noho ny Amerikana. Nasondrotra mari-boninahitra ho kapiteny izy taty aoriana.
Nanova ny fomba fijerin'i Miller ny ady nifanaovan'ny Britanika sy ny Amerikana, indrindra ny fandresen'ny miaramila Amerikana izay tsy nisy afa-tsy 1 500 sy olon-tsotra 4 000, nefa ny Britamika nisy miaramila zatra ady niisa 15 000. Aminy dia tsy asan'olombelona izany.
I William Miller sy ny asany[hanova | hanova ny fango]
Nandinika ny faminaniana ao amin'ny Baiboly[hanova | hanova ny fango]
Tabilaon-tsary nentin'i William Miller nanao ny kajy
Nonina tao amin’ny toeram-pambolena sy fiompiana lehibe iray tany Low Hampton any amin’ny Fanjakan’i New York i Wiliam Miller. Nampiana-tena izy ary mpamaky ny Baiboly nahafatra-po sady mpivavaka tao amin’ny Fiangonana batista. Nanomboka tamin'ny taonjato faha-18 tao Eoropa dia nanao toriteny mamohafoha ny finoana i William Miller izay nitory amin’ny fomba mazava ny fototra iorenan’io fihetsiketsehana io sady nanome azy ny firehany ara-potokevitra. Nasaina nitoriteny i William Miller ka nanatanteraka izany tokoa ary nihamaro ny mpanaraka azy. Nitory ny fahantomotry ny fiavian'i Jesosy Kristy izy. Mihoatra ny 3 000 ny valandresaka nataony izay niteraka fifohazam-panahy avy ao Nouvelle Angleterre ka nanerana an'i Amerika. Nalaza hatrany Eoropa izany fampianarana izany.
Namantatra ny fotoana hiverenan'i Kristy[hanova | hanova ny fango]
Nanomboka tamin'ny taona 1814 i Miller dia tsy afa-po tamin’ny fampianaran'ny deista ka niverina ho kristiana indray sady nandinika amin'ny antsipiriany ny Baiboly, indrindra ny Bokin'i Daniela sy ny Apokalipsin'i Joany. Niezaka nanao fivoasana ara-tarehimarika ny Bokin'i Daniela (Dan. 8.14) sy ny Bokin'ny Apokalipsy (Apo. 14.9-12) i William Miller ka nanatsoaka hevitra fa i Kristy dia hiverina indray eto an-tany amin’ny taona 1843 sady hanjaka arivo taona miaraka amin’ireo olom-boafidiny. Izany fiaviana fanindroan’i Kristy eto an-tany izany no atao hoe "parosia".
Ireo fahadisoam-panantenana[hanova | hanova ny fango]
Nanambara i William Miller sy ireo mpanaraka azy fa hiverina indray aty an-tany eo anelanelan’ny 21 Marsa 1843 sy 21 Marsa 1844 i Kristy. Tsy tanteraka anefa izany. Atao hoe "Fahadisoam-panantenana voalohany" izany tsy fahombiazan’ny faminaniany izany. Nihevitra ireo mpanara-dia natoky an’i William Miller fa fahadisoam-pikajiana no niteraka izany. Ireo mpanaraka an’i Miller dia niisa eo anelanelan’ny 50 000 sy 100 000. Maro anefa ireo niala ny fikambanana tamin’izany fotoana izany.
Novan'i Miller indray ny daty hiavian’i Kristy ka ny 22 Oktobra 1844 izany. Rehefa nihananakaiky ilay andro lehibe dia tsy nanao ny asa aman-draharaha fanao andavanandro intsony ny mpanara-dia an'i Miller (ireo Milerita) ka tsy nivarotra intsony ny mpivarotra, tsy nanonta boky intsony ny mpiasan’ny trano pirinty, tsy nankany an-tsaha intsony ny tantsaha. I Miller sy ireo namany akaiky dia nankeo andrefan-tranony teo ka niandry ny fiavian'ny Tompo teo sy ny fitsangan'ireo efa maty ho velona indray ka hiakatra any an-danitra. Tsy tanteraka koa izany faminaniana izany ka niteraka ilay atao hoe "Fahadisoam-panantenana lehibe".
Fiparitahan'ny mpanaraka an'i Miller[hanova | hanova ny fango]
Maro ireo Adventista nandao ny fananany ka lasa fihomehezan’ny olona ilay fikambanana tamin’ny fahatongavan’ilay andro nandrasana nefa tsy nisy zava-nitranga. Tsy vitsy koa ireo mpanara-dia an’i Miller izay niala aminy. Roa ny fanapahan-kevitry ny mpanaraka an'i Miller ka ny sasany niverina tamin’ny fiangonana niaviany avy fa ny hafa kosa niova anarana hoe American Millenial Association (ara-bakiteny: "Fikambanan’ny Arivo taona Amerikana") ka ny mpikambana ao aminy dia natao hoe Evangelical Adventis ("Adventista ara-Pilazantsara") taty aoriana. Izay mbola nitoetra taminy dia nizara ho antoko efatra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Miller&oldid=990550"
Voaova farany tamin'ny 5 Mey 2020 amin'ny 13:43 ity pejy ity.